मकवानपुरमा ड’रलाग्दो सुमो दुर्घटना, २ को ज्यान गएपछि यस्तो डरलाग्दो अवस्था! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मकवानपुरमा ड’रलाग्दो सुमो दुर्घटना, २ को ज्यान गएपछि यस्तो डरलाग्दो अवस्था!
काठमाण्डौं । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका गढीमा आइतबार दिउँसो सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । हेटौँडाबाट भीमफेदीतर्फ जाँदै गरेको ना १ ज ४१०६ नम्बरको सुमो सडकबाट करिब डेढ सय मिटर तल ख से र दुर्घटना हुँदा दुई जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता इन्द्रबहादुर रानाले बताएका छन । ज्यान गु’माएकाहरुको हाल सना’खत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनका अनुसार उक्त दुर्घटनामा परी सुमो चालकसहित तीन जना ग’म्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरुको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उक्त सुमोमा चालकसहित आठ जना सवार थिए । अर्को समाचार अनुसार, चितवनको माडीमा वन्यजन्तु धपा’उन राखिएको क’रे’न्ट लागेर आज एक जनाको निधन भएको छ । ज्यान गुमाउनेमा माडी नगरपालिका ६ वसन्तपुरका ६० वर्षीय सुकदेव महतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक देवराज शर्माले जानकारी दिए ।
बलिउडका भाईजान सलमान खानको विबाह
एजेन्सी । बलिउडका भाईजान सलमान खानले विबाहको विषयले फेरी एकपटक बलिउड तातिएको छ । सलमान खानले कोसंग विबाह गर्लान् त भन्ने विषय न केवल बलिउडलाई मात्रै छ यो पुरै एसियाकैलागी एउटा जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यस्तोमा बलिउडका भाईजान खानले आफ्नो विवाहको बारेमा पण्डितलाई आफै जिज्ञासु बनेर सोधेको कुराले सबैको ध्यान तानेको छ ।
सलमान खानले आफ्नो विबाहको बारेमा पण्डितसंग आफैले विगतमा भनिएको आफ्नो विबाहको लगन र गुणदोषका कुराहरु यो वर्ष पनि उत्तिकै जिज्ञासु भएर सोधेको कुरा अहिले बलिउडमा निकै नै चर्चाको विषय बनेको छ । सबै सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नै आफ्नै विवेक प्रयोग गर्दै भाईजान खानको विबाहको विषयमा हेड लाईन राखेर समाचार सम्प्रेषण गरि रहेका छन् । सलमानले आफ्नो विबाहको बारेमा पण्डितलाई घरमा बोलाएर भने सोधेका थिएनन् ।
उनले विगत केही वर्षदेखि लगातार होस्ट गर्दै आएको लोकप्रिय शो ‘बिगबोस १४’ शो को पहिलो एपिसोडमा पाहुना बनेर आएका जनार्दन बाबासंग आफ्नो विबाहको बारेमा सोधेका थिए । त्यसरी सोध्ने क्रममा सलमानले निकै नै गम्भिर भएर सबै कुरा जान्न चोहेका थिए । उक्त पहिलो बिगबोस १४ को पहिलो एपिसोडमा जनार्दन बाबाले पनि सलमानलाई उनले सोधे जति सबै प्रश्नको जवाफ दिएर विबाहको बारेमा सन्तष्त बनाएका थिए ।
त्यसरी सोध्ने क्रममा बलिउडका भाईजानले विगतमा उनै पण्डितले भनेको कुरा पण्डितलाई नै स्मरण गराउँदै ठट्टेउली पारामा भनेका थिए, ‘तपाईले ६ वर्षअगाडी मेरो विवाह अर्को वर्ष हुन्छ भन्नु भएको थियो । के मेरो विवाहको योग सकिएको हो ?’ सलमानको यो प्रश्नमा बाबले भने, तपाइँको विवाहको योग गइसेकेको छ ।’ बाबाको कुरा सुनेपछि सलमान खान नाच्न सुरु गरे । खान साहाब नाचेको देखेर मञ्चमा हाँसोको माहोल बनेको थियो ।